I-Rustic Retreat in the Cabin at the Castle - I-Airbnb
I-Rustic Retreat in the Cabin at the Castle
Indlu encane ibungazwe ngu-Brad/Lisa
Hamba ngempelasonto noma phakathi neviki, jabulela izinto ezibonwayo zendawo noma izindawo eziningi zomlando, noma indawo yemvelo ebukekayo kungaba wukuqwala izintaba noma eminye imisebenzi yangaphandle. Eduze kwe-Ski Roundtop noma ezinye izintshisekelo eziningi.
Leli yindlu yekamelo elilodwa elishisayo eduze kwe-heater yesikhala, ulethe izikhwama zakho zokulala kanye nekamu ekamelweni. Imbiza ye-porta yangaphandle enesiteshi sokugeza izandla. Umenzi wekhofi noma amanzi ashisayo nendawo yevulandi engaphandle yokuphumula, netafula nezihlalo ngaphakathi nasevulandini.